China Passenger Car Association-နို ၀ င်ဘာလတွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များ၏ လက်လီ ရောင်းချ မှုနှုန်းသည် ၂၀. ၈% ၊ တရုတ် ကား အမှတ်တံဆိပ် များသည် ရောင်းအား ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ကျော် ရှိသည် – Pandaily
China Passenger Car Association-နို ၀ င်ဘာလတွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များ၏ လက်လီ ရောင်းချ မှုနှုန်းသည် ၂၀. ၈% ၊ တရုတ် ကား အမှတ်တံဆိပ် များသည် ရောင်းအား ၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ကျော် ရှိသည်
Dec 08, 2021, 19:03ညနေ 2021/12/09 00:10:26 Pandaily
ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင်China Passenger Car Association မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလတွင် အမျိုးသား ခရီးသည်တင် ကား စျေးကွက် အား သုံးသပ် ချက် ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်.
အချက်အလက်များအရ နို ၀ င်ဘာလတွင် စွမ်းအင် ခရီးသည်တင် ကား အသစ် များ၏ လက်ကား ရောင်းအား သည် ၄ ၂၉, ၀၀၀ အထိရောက် ရှိခဲ့ပြီး ယခင် လ ထက် ၁၇. ၉% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ယခင်နှစ် ထက် ၁၃၁. ၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ယ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ မှ နို ၀ င်ဘာ လအထိ စွမ်းအင် အသစ် ခရီးသည်တင် ကား အသစ် များ၏ လက်ကား ပမာဏသည် ၂. ၈ ၀၇ သန်းကို မှတ်ပုံ တင်ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၉၀. ၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။
နို ၀ င်ဘာလတွင် စွမ်းအင် သုံး ခရီးသည်တင် ကား အသစ် ၃ ၇၈, ၀၀၀ ကို လက်လီ ရောင်းချ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၂၂. ၃% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ယခင် လ ထက် ၁၉. ၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီ မှ နို ၀ င်ဘာ လအထိ စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် ၂. ၅ ၁၄ သန်းကို လက်လီ ရောင်းချ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁ ၇၈. ၃% တိုးတက်ခဲ့သည်။
စွမ်းအင် ယာဉ် စျေးကွက် အသစ် ဖျက်သိမ်း မှုနှုန်း
နို ၀ င်ဘာလတွင် စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ် သူများ၏ လက်ကား စျေးကွက် ထိုးဖောက် မှုနှုန်းသည် ၁၉. ၉% နှင့် ဇန်နဝါရီ မှ နိုဝင်ဘာ လအထိ ၁၅. ၀% ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ တွင် ၅. ၈% မှ သိသိသာသာ တိုးတက်ခဲ့သည်။
ကွဲပြားခြားနားသော စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များ၏ စျေးကွက် ထိုးဖောက် မှုနှုန်း ကွဲပြားခြားနားသည်။ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ် များအတွက် အချိုးမှာ ၃၃. ၂% ရှိပြီး ဇိမ်ခံ ကား များအတွက် ၂၄. ၆% ရှိသည်။ သို့သော် အဓိက ဖက်စပ် အမှတ်တံဆိပ် များ၏ အချိုးမှာ ၃. ၉% သာရှိသည်။ နို ၀ င်ဘာလတွင် လျှပ်စစ် ကား အစီးရေ ၃၄ ၃၀၀၀ ကို လက်ကား ရောင်းချ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၂၁. ၁% တိုးလာခဲ့သည်။ plug-in hybrid မော်တော်ယာဉ် များ၏ ရောင်းအား မှာ ၈၅၀ ၀၀ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၈ ၇. ၂% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၂၀% ရှိသည်။
နို ၀ င်ဘာလတွင် အဆင့်မြင့် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များ၏ ရောင်းအား သည် ကြီးထွား လာပြီး တတ် နိုင်သော လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များ သည်ပုံမှန် တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက် A00 အတန်းအစား လက်ကား ရောင်းအား သည် ၁၀ ၈၀၀၀ စီး ပြီး ရှယ်ယာ သည် & nbsp သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း လျှပ်စစ် ကား ရောင်းအား ၏ ၃၁% ။ လက္ကား ေရာင္းခ် မႈမွာ A0 Class လွ်ပ္စစ္ ကား အစီးေရ ၅၃ ၀၀၀ အထိ ရွိခဲ့ၿပီး ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ ရွိကာ A-Class လွ်ပ္စစ္ ကား အစီးေရ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ B-Class လွ်ပ္စစ္ ကား အစီးေရ ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိကာ အစီးေရ ၉၁ ၀၀၀ အထိ ေရာင္းခ် ခဲ့ရၿပီး ယခင္ လ ထက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ ခဲ့သည္။
နို ၀ င်ဘာလတွင် ပြည်တွင်း စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် လက်လီ စျေးကွက် ၏ ထိုးဖောက် မှုနှုန်းသည် ၂၀. ၈% နှင့် ဇန်နဝါရီ မှ နိုဝင်ဘာ လအထိ ၁၃. ၉% ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ တွင် ၅. ၈% မှ သိသိသာသာ တိုးတက်ခဲ့သည်။ နို ၀ င်ဘာလ တွင်တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များသည် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် ၃၇. ၄% ၊ ဇိမ်ခံ ကား အမှတ်တံဆိပ် ၁၉. ၄% နှင့်အဓိက ဖက်စပ် အမှတ်တံဆိပ် ၃. ၆% သာရှိသည်။
ထို့အပြင် နို ၀ င်ဘာလတွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ တင်ပို့မှု သည် တိုးတက်မှု ရှိခဲ့သည်။ Tesla သည် ၂၁, ၁၂၇ စီး၊ SAIC ခရီးသည်တင် ကား ၆၁ ၁၀ စီး၊ Geely Automobile Group ၄၇ ၀၊ Great Wall Automobile ၄၂ ၆ နှင့် BYD ၄၀ ၄ တို့ကို တင်ပို့ ခဲ့သည်။ အခြား ကား ကုမ္ပဏီ များမှ စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ်များ တင်ပို့မှု သည်လည်း တိုးတက်မှု အရှိန်အဟုန် ကိုပြသ နေသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် ဘဏ္ Finance ာရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များအတွက် ကြိုတင် ထောက်ပံ့ငွေ ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံ ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
စွမ်းအင် အသစ် ခရီးသည်တင် ကား အရောင်း
နို ၀ င်ဘာလတွင် စွမ်းအင် အသစ် ခရီးသည်တင် ကား စျေးကွက် သည် အမျိုးမျိုး ကွဲပြား ခဲ့ပြီး SAIC Group နှင့် GAC Automobile တို့သည် အတော်အတန် ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။ ႐ိုးရာ ကား ကုမၸဏီေတြက ဆက္ၿပီး ေကာင္း ေအာင္ လုပ္ေန ၾကတယ္။ BYD ၏ စင်ကြယ်သော လျှပ်စစ်နှင့် plug-in hybrids များ၏စွမ်းဆောင်ရည် သည် ခိုင်မာသော ကိန်းဂဏန်း များ ကိုပြသသည်။
ယူနစ် ၁၀၀၀၀ ကျော် ရောင်းချ သော ကုမ္ပဏီ ၁၄ ခု ရှိပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း တစ်ခုလုံး သည် တိုးတက်မှု လမ်းကြောင်း ကိုပြသ နေသည်။ BYD ကား ၉ ၀၅ ၄၆ စီး၊ Tesla China ကား ၅ ၂၈ ၅၉ စီး၊ SAIC GM Wuling ၅၀ ၁၄၁ စီး၊ Great Wall ကား ၁၆ ၁၃၆ စီး၊ Xiaopeng ကား ၁၅၆ ၁၃ စီး၊ GAC 15035 စီး၊ Chery 14482 စီး၊ Lee ကား ၁၃၄ ၈၅ စီး၊ Neo 13090 စီး၊ SAIC 10705 စီး၊ Haozong 10013 စီး ။
နို ၀ င်ဘာလတွင် Xiaopeng Automobile, Lithium Automobile, NIO , Haozong Automobile, Feiyue Automobile, WM Automobile စသည့် တရုတ် စွမ်းအင် ကား ကုမ္ပဏီ အသစ် များ၏ ရောင်းအား သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကောင်းစွာ တိုးတက်ခဲ့သည်။ Hozon ကား အစီးေရ တစ္ ေသာင္းေက်ာ္ ေရာင္းခ် ခဲ့ရၿပီး Leap Motor ႏွင့္ WM Motor ကဲ့သို႔ေသာ ဒုတိယ အဆင့္ ကုမၸဏီ မ်ားကလည္း တစ္လလွ်င္ အစီးေရ ငါးေထာင္ ေက်ာ္ ေရာင္းခ် ခဲ့ရသည္။
အဓိက ဖက်စပ် အမှတ်တံဆိပ် များအနက် SAIC Volkswagen နှင့် FAW-Volkswagen တို့သည် လက်ကား ရောင်းအား ၂၂, ၆ ၉၁ ခုကို မှတ်ပုံတင် ထားပြီး အဓိက ဖက်စပ် ရောင်းအား ၏ ၆၂% ရှိသည်။ BMW Brilliance သည် စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် ၅, ၁၉၄ စီးကို ရောင်းချ ခဲ့ပြီး ယခင် လ များ ကထက် တိုးတက်ခဲ့သည်။ အခြား ဖက်စပ် လုပ်ငန်း များနှင့် ဇိမ်ခံ အမှတ်တံဆိပ် များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နံပါတ် များ ကိုကြည့်ရှု ရန် အချိန်ယူ ရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် နို ၀ င်ဘာလတွင် သာမန် ဟိုက် ဘရစ် ခရီးသည်တင် ကား ၆၆, ၄၀၀ ကို လက်ကား ရောင်းချ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် ၄၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ပြီး ယခင် လ ထက် ၈ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။
Tags ∗XPeng | automotive industry | electric vehicle | Li Auto | NIO∗
Nio ES8 ယာဉ်မောင်းဖြစ်သူ NOP အသုံးပြုမောင်းနှင်နေစဉ် သေဆုံး
ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္က အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၊ လြယ္လင္ၿမိဳ႕ တည္ ေထာင္သူ ေဒၚခင္ၾကည္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ သည္။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၾကည္လင္းက အဆိုပါယာဥ္သည္ Nio ES8 ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ၎၏ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္မႈ အဂၤါရပ္ (NOP Pilot Status) ကို စတင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
Auto Aug 15 ဩဂုတ် 15, 2021
၂၀၂၀ မှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံး မော်တော်ကား ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခု
၂၀၂၀ ၾသဂုတ္လအထိ ေစ်းကြက္တန္ဖိုးကို တြက္ခ်က္ၿပီး တ႐ုတ္ရဲ႕ တန္ဖိုးအရွိဆံုး ကားကုမၸဏီစာရင္းေတြကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပသြားမွာပါ။
Industry Sep 06 ဩဂုတ် 20, 2021
NIO သည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဘက်ထရီ အဆင့်မြှင့်တင် မှု ဝန်ဆောင်မှုကို စတင် ခဲ့သည်
တ႐ုတ္ လွ်ပ္စစ္ ကား ထုတ္လုပ္ သူ Neo က ၁၀၀ ကီလို ၀ပ္ နာရီ ဘတ္ ထရီ ကို တနဂၤေႏြေန႔က မိတ္ဆက္ ခဲ့ၿပီး ဘက္ထရီ ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ မယ့္ အစီအစဥ္ေတြ
Auto Dec 06 ဒီဇင်ဘာ 7, 2021
ကြယ်ပွင့် တရုတ် ကား ထုတ်လုပ် သူက ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တင်ပို့ မှုကို ကြေငြာ ခဲ့သည်
အင်္ဂါနေ့ တွင်တရုတ် ကား ထုတ်လုပ်သူ အများအပြား သည် မကြာသေးမီက ရောင်းအား အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ Nio Inc. သည်ကား သစ် ၆, ၁၃၁ စီး အပ်နှံ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၉. ၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။
Auto Mar 02 မတ် 2, 2022